Breaking News Jaarmayaaleen Oromoo walii galan Caamsaa 1, 2016 | robemedia
Home AfaanOromo Breaking News Jaarmayaaleen Oromoo walii galan Caamsaa 1, 2016
Breaking News Jaarmayaaleen Oromoo walii galan Caamsaa 1, 2016
Jaarmayaaleen Oromoo walii galan Caamsaa 1, 2016
“ODF”, “ABO”, “United ABO” fi “KWO” hara waalii galannii jiran. Torbee lamaa kessattii kooreen dhabattee xumura godhee akka hala tokkoon gadhii ba’aan murtessanni jiru. Kun qabsoo Oromottif waan gudadhaa.
Mangudonnii ji’aa shannii oli wanta kana irrattii hojjettaan galata guda qaban! Waan gadi ba’aaniin turbee lamaan dhuftuu keessattii ni bara.
Fedhiin Oromo bekammadhaa: Dhabaa lama qabachuu, ABO fi OFC! Saaniin ala waan barbannu hin jiru.
Jaarmayaaleen siyaasaa Oromoo waliigaltee irra gayuun waan nama gammachiisa. Waliigalteen kun cimee hojitti akka hiikkamuuf deeggarsaafi dhiibbaa nu hundaati barbaachisa.
Previous articleOMN on air again to liberate Oromiyaa air, down with TPLF subjugation!
Next articleEbbaa Manguddo guyya gotota Oromo 2016 Cairo egypt
Status of damage made by TPLF army
The Tigre empire in shambles
Among 43 that massacred today by TPLF army in Ethiopia,...
Kofale responds to TPLF state of emergency in massive defiant rally
This Month: 46872